Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Greece » Ny fisokafan'ny fizahan-tany any Gresy izay nankafizin'ny WTTC dia notandreman'i WTN
Moa ve ny fanokafana ny fizahan-tany indray dia i Gresy? Ohatra ve izany ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany? Tsy mbola misy mahalala ny valiny, saingy i Gresy no miloka, ary nitehaka ny WTN ary koa ny WTTC.
I Greece dia mitarika amin'ny fanokafana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany kendrena amin'ireo mpitsidika vita vaksiny
Ny WTTC dia mitehaka amin'ny drafitra Greka milaza fa ao anatin'ny fiaraha-miasa marina miaraka amin'ny torolàlana WTTC io
Ny WTN koa dia manao tehaka ny drafitry ny Grika, saingy te hanana drafitra fitetezana toerana izay afaka mamaly haingana ny toe-javatra tsy ampoizina.
Betsaka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany no miantso drafitra tsara sy làlana iray, hoy ny hafa fa mbola atahorana ihany izany. Tranga grev COVID-19 no miakatra miaraka amina tranga vaovao 2629 ary 43 ny maty androany 10 martsa 2021
Gloria Guevara, filoha & CEO an'ny Filankevitry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany (WTTC) dia nidera ny fanapahan-kevitry ny minisitry ny fizahan-tany gresy Harry Theocharis rehefa nanambara izy fa handray ireo mpitsidika i Greece amin'ity fahavaratra ity izay vita vaksiny, izay manana antibodies, na izay nanandrana ratsy ho an'ny coronavirus. Ny drafitra dia ny hisokafan'i Gresy manomboka amin'ny tapaky ny volana Mey, izay afaka roa volana mahery.
Ny mpikambana ao amin'ny WTTC no orinasa lehibe indrindra manerantany amin'ny fizahan-tany.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany nanontany ny mpikambana ao aminy any Greece ary izay rehetra namaly dia nankasitraka ny fomba fiasa nataon'ny governemanta grika ihany koa. Mpikambana ao amin'ny the Tambajotra fizahan-tany manerantany ny ankamaroany dia orinasa salantsalany sy madinidinika ary sehatra ho an'ny daholobe any amin'ny firenena 126.
"Ity sori-dalan'ny famerenana amin'ny laoniny ity dia afaka manokatra varavarana mankamin'ny fitsangatsanganana an-dalambe ho an'ireo mpanao fialantsasatra maty ny masoandro mitady hitsoaka any Gresy ary hanome tosika lehibe ny toekarem-pirenena.", Hoy i Guevara.
“Izy io koa dia mamelatra ny làlana izay azon'ny firenen-kafa arahana, amin'ny ezaka hanombohana ny dia tsara sy hanampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarem-piainan'izy ireo.
“Ny paikadim-panjakana sy ny fepetra noraisin'ny governemanta grika dia naseho fa mifanaraka amin'ny torohevitra WTTC ary faly izahay fa handray ny mpandeha tsy ho ela miaraka amin'ny porofon'ny vaksiny, fitsapana ratsy na fitsapana antibody tsara, ka ny tranga tsara ihany no takiana amin'ny quarantine.
"Ireo fepetra takiana amin'ny fidirana ireo miaraka amin'ny fitsapana haingana tampoka amin'ny fahatongavany, ny fepetra fanatsarana ny fahasalamana sy ny fahadiovana ary ny fanaovana sarontava tsy maintsy atao mandritra ny dia sy ny toerana malalaka dia hanomezana toky ny mpanjifa hamandrika ny diany.
“I Gresy dia iray amin'ireo toerana itodiana malaza indrindra any Eropa ho an'ireo mpandeha ary toa izany, miankina betsaka amin'ny dia iraisam-pirenena, miaraka amin'i Alemana sy UK no loharanom-baovao lehibe indrindra.
“Tamin'ny taona 2019, ny sehatry ny Travel & fizahan-tany dia nitondra 20.8% ho an'ny harin-karena faobe (€ 39.1BN) ary nanohana mihoatra ny ampahadimin'ny asa rehetra - izay mampiseho ny maha-zava-dehibe ny Travel & fizahantany amin'ny famahanana ny harinkarenany.
Hoy i Gloria Guevara: "Mino tanteraka izahay fa ny tondrozotra grika dia mampiseho ny làlana azo ampiharina mba hamporisihan'ny firenena hafa ny fiverenan'ireo dia tsara, satria mahazo vahana ny famoahana vaksinina hamerenana ny fivezivezena an'izao tontolo izao hamindra ny tany.
Ny mpiorina WTN Juergen Steinmetz dia miombon-kevitra amin'ny WTTC amin'ny tehaka an'i Greece amin'ny hetsika feno fahasahiana: "Tena mametraka fironana tokoa i Gresy, saingy mbola tsy fantatsika izay mety ho dikan'ny dia amin'ny fanafarana virus, indrindra ireo karazana vaovao. Tsy fantatsika raha afaka mitondra ny olona vita vaksiny, ary mila mahazo antoka isika fa afaka mihetsika i Gresy raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny zava-misy vaovao ny fanantenana. Raha miteraka fampahalalana mifanohitra amin'izay antenaina ny zava-misy any Gresy dia tokony hampiditra làlana mazava sy torolàlana ho an'ny scenario roa i Gresy alohan'ny hanokafana ny firenena. Ny drafitra fikorisa toa azy napetraka any Hawaii dia mety ho ohatra tsara. ”
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia nilaza tamin'i Richard Quest ny drafi-pamonjeny amin'ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra